ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ရုရှားမှာ နျူကလီးယားလက်နက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ? - Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Global News ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ရုရှားမှာ နျူကလီးယားလက်နက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?
ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ရုရှားမှာ နျူကလီးယားလက်နက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ?
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် အနောက်နိုင်ငံများအား ယူကရိန်းအပေါ်လုပ်ရပ်သည် ၎င်းတို့မမြင်ဖူးသော အကျိုးဆက်များဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျောချမ်းစရာသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရုရှားသမ္မတဟာ ယူကရိန်း၏ နေတိုးအဖွဲ့ထဲ ၀င်ရောက်ခြင်းအား ဟန့်တားပြီး မော်စကိုကို လုံခြုံရေး အာမခံချက်မပေးရန် တောင်းဆိုသည်ကို အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံများက လျစ်လျူရှုကြောင်း စွပ်စွဲလိုက်သည်။
ရုရှားသည် ၎င်း၏ရန်သူများအား တိုက်ခိုက်ရန် နျူကလီယားလက်နက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဟုဆိုကာ စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ရုရှား၏ နျူကလီးယားလက်နက်များတွင် တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်များ သို့မဟုတ် ICBMs များပါ၀င်ပြီး မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ အထိ ရောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန် သည့် အချက်အလက်များအရ ရုရှားနှင့် အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဟာ နျူကလီးယားလက်နက် ထောင်ပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယူကေ၊ ပြင်သစ်နှင့် တရုတ်တို့က ရာဂဏန်းအရေအတွက်မျှသာ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
ရုရှား – ၆,၂၅၇
အမေရိက – ၅,၅၅၀
ယူကေ – ၂၂၅
ပြင်သစ် – ၂၉၀
ပါကစ္စတန် – ၁၆၅
အိန္ဒိယ – ၁၅၆
မြောက်ကိုရီးယား – ၄၀
ယူကရိန်းမှာ နျူကလီးယားလက်နက် မရှိပါဘူး။
ယူေက၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ႐ုရွားမွာ န်ဴကလီးယားလက္နက္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ?
႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအား ယူကရိန္းအေပၚလုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔မျမင္ဖူးေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာခ်မ္းစရာသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
႐ုရွားသမၼတဟာ ယူကရိန္း၏ ေနတိုးအဖြဲ႕ထဲ ၀င္ေရာက္ျခင္းအား ဟန႔္တားၿပီး ေမာ္စကိုကို လုံၿခဳံေရး အာမခံခ်က္မေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ကို အေမရိကန္နဲ႔ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက လ်စ္လ်ဴရႈေၾကာင္း စြပ္စြဲလိုက္သည္။
႐ုရွားသည္ ၎၏ရန္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ န်ဴကလီယားလက္နက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏ န်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားတြင္ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ICBMs မ်ားပါ၀င္ၿပီး မိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အထိ ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
လက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ န်ဴကလီးယားလက္နက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ယူေက၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က ရာဂဏန္းအေရအတြက္မွ်သာ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။
႐ုရွား – ၆,၂၅၇
အေမရိက – ၅,၅၅၀
ယူေက – ၂၂၅
ျပင္သစ္ – ၂၉၀
ပါကစၥတန္ – ၁၆၅
အိႏၵိယ – ၁၅၆
ေျမာက္ကိုရီးယား – ၄၀
ယူကရိန္းမွာ န်ဴကလီးယားလက္နက္ မရွိပါဘူး။